Ko yako itsva Apple Watch Series 4 inotangazve yega? | Ndinobva mac
Ko yako itsva Apple Watch Series 4 inotangazve yega?
Zvinotaridza kuti vamwe vashandisi vangave vari kusangana nedambudziko re inotangazve neiyo itsva Apple Watch Series 4Kunyangwe risiri iro dambudziko rakawanda, ichokwadi kuti mishumo yakati wandei iri kuuya kuzobuda kubva kuvashandisi vanogunun'una nezve kutadza.
Parizvino rimwe rematambudziko arikutaurwa pamambure neiyo itsva Apple wachi inoreva nguva ichangopfuura shanduko muAustralia, iyo yakabatawo varidzi vanoverengeka vechigadzirwa ichi neyakajairwazve wachi pasina chikonzero chiri pachena. Izvi pakutanga zvinoita kunge zviri panguva yakakodzera uye hazvitapure vese vashandisi vewadhi yekuchenjera, asi munguva pfupi isu tichava nenguva yekuchinja muEurope uye zvinogona kuti kukundikana kunodzokororwa, tichaona zvinoitika.
Iko kukanganisa iko kwekugara uchitangazve uye zvinoenderana nezvatinogona kuverenga mune mamwe midhiya kunogadziriswa zvakananga nekuchinja nguva yewachi yedu nemaoko, asi iyi haisiyo mhinduro kudambudziko rekushandura nguva ingangoita chero. Pakupera kwaGumiguru isu tichachinja nguva pano uye zvinogona kuti isu tinoona aya anotangazve paApple Watch. Iko hakuna kutaura kwemhando dzakapfuura, kana iri modhi ine LTE kana isina, saka hatigone kutaura kuti iri mumhando dzese ...
Hazviitike kune wese munhu, dzikama
Uye ndezvekuti zvinoita kunge zvisingaite kunge dambudziko mune ese maApple Watch Series 4 mamodheru akatengeswa, ayo ari mamirioni pasirese. Apple yechikamu chayo haitauri pane chero cheichi chinokundikana kana kutanga patsva. saka isu tinofungidzira kuti aya ndiwo chaiwo kesi dzisingakanganise munhu wese.
Yangu nyaya yekuti ndanga ndiine Apple Watch Series 4 kubvira Chishanu chapfuura masikati, ndeyekuti haina kutangwazve kana kamwechete uye zviri pachena handidi kutaura kuti izvi hazviitike, asi zvinoita sekunge zviri nani kutadza kwakati kwechimwe chikamu cheawa. Muchiitiko chekuti uku kukundikana kwakapararira, Apple ine chokwadi chekutanga vhezheni itsva yesoftware kana chirongwa chekutsiva, asi isu takatotaura kuti panguva ino zvinoita kunge zvisina basa. Une Apple Watch Series 4 here? Yakambotangazve yega?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Ko yako itsva Apple Watch Series 4 inotangazve yega?
Luis Manuel Aguado akadaro
Mhoroi, ndatangazve iyi svondo rapfuura katatu, nhasi Svondo yeMichindwe mumwe wavo
Pindura kuna Luis Manuel Aguado
Ko iyo AirPods 2 ichave nekuzvimiririra kwakafanana?
macOS Mojave 10.14.1 beta 3 yave kuwanikwa kune vanogadzira